शेयर बजारलार्इ घटाउने रहस्य के ? कहिले फर्कन्छ पुरानै लयमा ? « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
शेयर बजारलार्इ घटाउने रहस्य के ? कहिले फर्कन्छ पुरानै लयमा ?
काठमाडौं। उच्च बिन्दुमा रहेको नेप्से लगातार घटेर न्युन बिन्दुमा आउन भेरै समय लागेन । पछिल्लो समय बैङ्किङ क्षेत्रमा देखिएका कतिपय समस्या समाधान भैसकेका छन् । तर सेयर बजार भने पुरानो लयमा जाने सुरसारमा देखिदैन । पछिल्ला दिनहरुमा केहि मात्रामा सधार आएपनी सेयरबजारमा अझै कारोबारमा उल्लेख्य सुधार देखिदैन । नेपाल स्टक एक्सचेन्जले दोस्रो बजारमा लगानीकर्ता भित्र्याउने पहलका कुराले बजारलार्इ धिमा गतिमा रिकभर गरिरहेको छ।
लगातार ओरालो लागेको बजार केहि करेक्सन हुने क्रममा पाँच दिन देखि बजार बढिरहेको छ। पाँच दिनमा ३९.४६ अंकले करेक्सन भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सरकारी संस्थाहरुको पैसा शेयर बजारमा ल्याउने पहल गर्ने समाचारले पनि मंगलबारको बजारलार्इ भरथेग विश्लेषकहरुको भनाई छ।
मंगलबारको कारोबार सुरुवात देखिनै बढ्न थालेको थियो। ११ः५५ बजे बजार लगातार उकालो लागेको भए पनि केही समय थोरै अंक झर्यो तर २५ मिनेट सम्ममा तीन अंक मात्रै झर्दा १४५० थियो यसैमा बजार सम्हालिएर पुनः गति लियो र अन्तिम सम्ममा बजार १२.२७ अंकको बृद्धि सहित १४५६.०७ अंकमा रोकियो।
सबै सूचक तथा उप सूचक उकालो लागेपनि उत्पादनमूलक समूह भने ३.११ अंकले ओरालो लाग्यो। मंगलबार सबैभन्दा धेरै होटल समूह २.८५ प्रतिशतले उकालो लाग्यो। साथै वाणिज्य बैंक १.०४, माइक्रोफाइनान्स १.०३, विकास बैक ०.८९, ट्रेडिङ ०.६६, हाइड्रोपावर ०.३१, इन्स्योरेन्स ०.४५ अन्य ०।६३, फाइनान्स ०.०९ प्रतिशतले उकालो लागेको छ।
मंगलबार सबैभन्दा धेरै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ६ करोड ३६ लाख रुपैयाँको कारोबार भयो। साथै मंगलबारको करोबारमा बेस्ट फाइनान्सका शेयरधनीले ६.११ प्रतिशतले कमाएका छन् भने एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका शेयरधनीले ९.९८ प्रतिशतले गुमाए।
माथिल्लो तामाकोसी शेयर वितरणमा कुरा मिलेन, ‘मोडालिटी’ सच्याउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन सुरु
काठमाडौं । शेयर वितरण ‘मोडालिटी’ सच्याउनुपर्ने माग गर्दै अपर तामाकोशी शेयर सरोकार संयुक्त संघर्ष समितिले
सूर्याको झण्डै २९ करोडको हकप्रद स्वीकृत, चुक्तपूँजी र सेयरमुल्य कती ?
काठमाडौ । सूर्या लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले २८ करोड ८७ लाख रुपैँयाको हकप्रद जारी गर्नको लागि
नेपाल लाइफले ४२ प्रतिशत बोनस शेयर र १० प्रतिशत एफपिओ जारी गर्न बोलायो साधारण सभा
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ४२ प्रतिशत बोनस शेयर र २८.५३ प्रतिशत कर प्रयोजन